Direct Composite Veneer | D Royal Dental Clinic
မိမိရှေ့သွား လေး မလှမပ ဖြစ် နေ လို့ ဓာတ်ဖမ်း တဲ့ အခါ ပဲ ဖြစ်ဖြစ် ၊fb မှာ Profile picture(Pp) တင်ထား တာပဲ ဖြစ်ဖြစ် မိမိသွား ကို စိတ်တိုင်း မ ကြလို့ ပြုံး ရုံ ပဲ ပြုံး ထားတတ်ကြပါသလား ။????????????
ဒီလို နည်းပညာ တိုးတက်နေတဲ့ 21 ရာစု ခေါတ် မှာတစ်နည်း မဟုတ် တနည်း မိမိသွားပြဿ နာ ကို ဖြေ ရှင်း ဖို့ နည်း လမ်း ကရှိပီး မို့ စိတ်မပူ ပါနဲ့တော့ နော် ။????
သွားတွေက လည်း ပြုံး လိုက် ရယ် လိုက် ရင် လှလှပပ လေး ဖြစ် ချင် တယ်။ ကြွေ လွှာကပ် ဖို့ ကလည်း ကုန်ကျ စရိတ်ကလည်း အ များကြီး ဆိုတော့ မိမိ ကိုယ် ပိုင် ဝင် ငွေ လေး နဲ့ ချိန် ဆလို့ စဉ်းစား ရခက်သူ များ အတွက် ပုံ မှန် ကြွေ လွှာ ကပ် ခြင်း ထက် ကုန်ကျ စရိတ် 5ဆ လောက် သက်သာ ပီး သဘာဝ သွား လေးအတိုင်း လှ ပသွား စေမယ့် Direct Composite Veneer လေး နဲ့ ညွှန်ပေး ပါရစေ နော် ။????????????
Direct Composite Veneer ဆို သည် မှာ လေဆာ ရောင် ခြည် နှင့် ဆေး (Light-Cure Composite) ကို အသုံး ပြု ပီး မိမိ စိတ် ကြိုက် Design ရအောင် ရှေ့သွား မျက် နာ ပြင်တစ်ခု လုံးကို ပုံ ဖော်တဲ့ နည်း ပညာ ပါ ။ :)
သူ ရဲ့အား သာ ချက် က မိမိ သွား မျက်နှာပြင် ပျက်စီး မှာကို ၊သွား ကျင် မှာကို ကြောက်တဲ့ ကိုကို မမ တွေ အတွက်တော့ သွားမျက်နှာကို လုံး ဝ စားပစ် စရာ မလိုပဲ သွားမျက် နှာ ပြင် အပေါ်က နေ composite veneer ကပ်ပေး မှာ ဖြစ်ပါတယ် ။
နဂို မကြိုက် လို့ ပြန် ခွာ ရင် လည်း မိမိ သွား မျက် နှာ ပြင် မစား ထားတဲ့ အတွက် သွားမျက်နှာ ပြင် အကောင်း အတိုင်း ကျန်စေ လို့ မိမိ သွား ကို တန်ဖိုး ထားတဲ့ သူတွေ အတွက် သတင်း ကောင်း ပါ ခင်ဗျာ ။????????????
ကြွေလွှာ ကပ်တာ လို နှစ်ခေါက်သုံး ခေါက် ချိန်းစရာ မလို ပဲ ဆေး ခန်း သို့တစ်ခေါက်လာရုံ နဲ့ကပ်တဲ့ သွားအချောင်းရေ ပေါ်မူတည် ပီး တစ်နာ ရီ ကနေ ၃ နာ ရီအတွင်း Hollywood smile or celebrity smile လေး လို လှပ သွားစေမှာ ဖြစ်ပါတယ် ။✌✌✌
ဘယ်လို သူ တွေ ပြု ပြင် လို့ ရပါသလဲ ????????????
(1)သွားကျဲ နေတဲ့သူ တွေ
(2)သွားအနည်းငယ် ထပ်နေ တဲ့သူ တွေ
(3)Tetracycline Staining ကြောင့် သွား ဝါ ၊သွား ညို တဲ့သူ တွေ၊Fluorosis ကြောင့် သွား အကွက်အကွက် ထနေတဲ့ သူတွေ။
(4)သွား ဖြူ ဖြူ ဖွေး ဖွေး ကို လို ချင်တဲ့သူတွေ ။
(6)ရှေ့သွား တွင် ပိုး စား ခြင်း ကြောင့် သွား အရောင်ပြောင်း တဲ့သူ တွေ
(7)မိမိ ရှေ့သွား အနေအထား ကို မ နှစ်သက်တဲ့ သူ တွ
Direct Composite Veneer ဖြင့် ပြု ပြင် ထား သော Clinical case များ ကိုအများ ကြီး တင်ပေး ထား လို့ လေ့လာနိုင်ပါတယ် ခင်ဗျာ ။
Address : အမှတ်(၅၀)၊ မြေညီထပ် ၊ အလယ်ဘလောက် ဌာနာလမ်း၊နတ်စင်လမ်းဘေးကပ်လျက်လမ်း၊ ကြည့်မြင်တိုင်မြို့နယ်၊ ကမ်းနားလမ်း နှင့်ပို နီး ၊ လမ်း ထိပ်တွင် မြန်မာ့ ရှေ့ဆောင် ဘဏ်ရှိ ။
Contact no.09979005387 Viber 09979005387